Ogaansho | Martech Zone
Axad, Juun 22, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Shalay waxaan la qaatay kulan cajiib ah maamule maxali ah shirkad. Wuxuu si dhakhso leh u noqonayaa lataliye iyo saaxiib. Isaguba waa Masiixi cibaado qaba. Anigu sidoo kale waxaan ahay Masiixi… laakiin intaadan gujin halkan, fadlan aan kuu sharaxo. Waxaan aaminsanahay Ciise waxaanan u adeegsadaa lataliye sidaan ula dhaqmo dadka kale. Da'da 39, shaqo weyn kuma aanan qaban tan laakiin waxaan isku dayaa inaan horumariyo. Halkan waa halka aan ku halgamayo:
Way igu adag tahay inaan gaaro macnaha dadka. Markii aan sii weynaado nolosha, aniga doonayaa inaan gacmaheyga u furo si aan ula jeedo dadka - laakiin waxaan door bidaa xitaa inaan siinin waqtiga maalinta. Shirkad siyaasad ku shaqeysa (ma shirkad walbaa taas?), Si fiican uma la ciyaaro dadka kale. Si fudud uma ciyaaro. Waan necbahay ciyaarta - Kaliya waxaan doonayaa inaan qabto shaqada. Sidoo kale waan necbahay in la ciyaaro. Waxba igama sii cadhaysiiyaan.
Waxaan la halgamayaa inta igu filan. Waan kireysanayaa sababtoo ah ma doonayo inaan guri yeesho. Waxaan wadaa gaari fiican. Ma iibsado alaabo badan oo ay caruurtu ku ciyaaraan. Marka la barbardhigo adduunka intiisa kale, waxaan ahay maalqabeen. Marka la barbardhigo Mareykanka, waxaan ahay dabaqadda dhexe, laga yaabee in yar oo aan ka hooseeyo. Ma caadi baa in la raaxaysto marka dadka kale ee adduunka aan ahayn? Sidee raaxo u noqon kartaa? Ma dambibaa inaad taajir noqoto? Ma aqaan.
Miyaan noqdaa dagaal-diid xitaa haddii taasi macnaheedu tahay dadku waxay ku noolaan doonaan kali-talisnimo dulmi badan? Miyay tahay inaan kaliya ka walwalo dalkayga iyo askarteena? Kirishtaan miyaa 'inaad ka fekertaa meheraddaada' markay dadka kale silcayaan? Haddii aad aragto qof isku dayaya inuu dilo qof kale oo ikhtiyaarkaaga kaliya ee aad ku joojin karto ay tahay inaad disho - ma kan kiristaan ​​baa? Tobanka Amar ayaa sheegaya in aynaan dil ahayn - oo ay wadaagaan diinta Yuhuudda, Masiixiyadda, iyo Islaamka.
Si aad u noqotid Masiixi weyn, ma tahay sida aad ugu nooshahay noloshaada, xiriirka aad Ilaah la leedahay, ama sida aad u tarjunto Kitaabka Quduuska ah? Waxaan akhriyay buugaag qurux badan oo ku saabsan tarjumaadda Baybalka oo bixiya caddayn buuxda oo ah in khaladaad lagu sameeyay tarjumaadda. Masiixiyiinta qaar waxay dhihi karaan waan caayayaa xitaa anigoo taas sheegaya. Waxaan u maleynayaa inay kufaan badan tahay qaybteenna inaan rumaysanno in tarjumaadda Aramaiga, Griigga, Laatiinka (laba jeer), Boqoradda Ingiriisiga, Ingiriisiga Casriga ah ee aan wax lumin luminta tarjumaadda. Ma aha inaanan ka baqiqin Ereyga, ee waa uun inaan u adeegsado hage ahaan oo aanan u ahayn tilmaam toos ah.
Waxaan jeclahay inaan qoslo. Ma jecli inaan ku qoslo 'dadka', laakiin waxaan jeclahay inaan ku qoslo 'dadka'. Waxaan ahay nin buuran waxaanan jeclahay kaftanka ragga buuran. Waxaan ahay nin cadaan ah waxaanan jeclahay inaan maqlo kaftan weyn oo ku saabsan dadka cadaanka ah. Waan ku qoslayaa dhamaan kaftanka siyaasadeed ee khaldan ee kuyaala South Park waxanan kadambeeyay naftayda. Waxaan u maleynayaa inay caadi tahay inaan ku qoslo nafteena ilaa inta ay ku jirto niyad wanaagsan, oo aan loola jeedin xamaasad. Waa kala duwanaanshaheenna gaarka ah ee dunidan ka dhiga mid midab leh. Aqoonsiga iyaga halkii aan isku dayi lahayn inaan qarinno waxay fure noo tahay inaan is ixtiraamno.
Waan ogahay inay tani tahay fariin falsafad ka badan tii aad ku soo barteen laakiin waxaan u maleynayaa inay runti u soo dhaceyso 'ogaanshaha' iyo 'iimaanka' wax kasta oo aan sameyno. Inaad dadka ku kalsoonaato waa hadiyad aad u weyn - laakiin waa mid adag oo ah in la koriyo iyadoo dadku ay naga dhigayaan marar badan. Kaliya kuwa ugu waaweyn ee hogaamiyayaashu waxay leeyihiin iimaanka noocaas ah.
Ogaanshuhu waa mid ka mid ah ereyada inta badan is khilaafsan oo u baahan xoogaa hubri, miyaanay ahayn? Waxaan nidhaahnaa waxyaabo sida:
“Waan ogahay sida aad dareemayso” - maya, run ahaantii ma ogid.
"Waan ogahay waxa ay macaamiisha rabaan" - marwalba waxaan ogaannaa waxyaabo kala duwan
“Waan ognahay inaan horumarnay” - laakiin xitaa ma daaweyn karno hargabka caadiga ah
"Waan ogahay inuu jiro Ilaah" - waxaad leedahay iimaan aan yarayn oo ah inuu jiro Ilaah. Maalin maalmaha ka mid ah waad ogaan doontaa, in kastoo!
Jimcihii waxaan la cabbay dad aad u tiro yar. Waxaan ka wada hadalnay dhammaan waxyaabaha laga fogaado - oo ay ku jiraan Siyaasadda iyo Diinta. Waan la yaabay markaan arkay in yar oo ka mid ah asxaabteyda inay yihiin diinlaawayaal. Runtii waxaan helay wax lala yaabo. Waxaan u maleynayaa inay wax weyn qaadaneyso iimaanka inaan noqdo diin laawe waxaanan rajeynayaa inaan kala hadlo waxbadan oo ku saabsan sida ay ku yimaadeen go aankooda iyo sababta. Xaqiiqdii ma fiirinayo dadka aan diin lahayn - maadaama ay dad yihiin, waxaan aaminsanahay inaan kula dhaqmo ixtiraam iyo jacayl sida qof kasta oo kale.
Adduunkeenu wuxuu jecelyahay inuu nagu xoojiyo kuwa rumaysta iyo kuwa aan rumaysadka lahayn iyada oo aan loo dulqaadanayn ama la ixtiraamaynin. Ogaanshuhu waa madow iyo caddaan, iimaanku waxyar ayuu dhaafaa oo wuxuu u oggolaadaa waxyaabaha sida ixtiraamka, qadarinta, iyo geesinimada. Markaan sii gaboobo, iimaankaygu wuu sii xoogaystaa. Iimaankaasna waxaa ka sii dulqaad badan dadka 'og'.
Waxaan rajaynayaa inaan ku sii wadan karo caqiidadayda oo aan noqon doono mid ka aqbala dadka kale.
UPDATE: Waxaan ilaaway inaan xuso boostada igu kicisay inaan waxbadan ka qoro tan. Mahadsanid Nathan!
Jul 22, 2007 markay tahay 2:17 PM
Ma ahan inaad ku dhajiso boostadaada kale (ka fog), laakiin tani waa inay noqotaa tan ugu fiican.
Si aad u wanaagsan ayaa looga fekeray oo fiican. Waxaan dhowaanahan ku qortay boggaga internetka ee blogga wacdiyeyaasha curyaanka ah, iyo haddii intaa ka sii badan oo sidan oo kale loo qoro… Waxaan noqon lahaa nin faraxsan.
Jul 22, 2007 markay tahay 2:30 PM
boostadani waa mid ka mid ah sababaha aad had iyo jeer boos joogto ah ugu heli doontid akhristaheyga quudinta. hubaal ma noqon karto tiknoolajiyad ama suuq-geyn ku saleysan laakiin mararka qaar waxyeello kuma geysaneyso in dadka loo sheego in ay jirto dhinac bini'aadam ah oo annaga noo ah geeks.
Jul 22, 2007 markay tahay 2:59 PM
Bravo. Intaasi waa intaas.
Jul 22, 2007 markay tahay 8:27 PM
Waxaan jeclahay in aan qabto dood diineed oo wanaagsan. Waxaan u arkaa naftayda diin laawe, laakiin waxay ahayd xiise xiise leh oo laga soo qaaday Masiixiyiinta shantii sano ee la soo dhaafay ama wax la mid ah. Kaliya kama gudbi karo xaqiiqda ah in haddii aad aaminsan tahay hal diin, aad raalli ka tahay dhibaatada weligeed ah ee bulshada inteeda kale, iyadoon loo eegin sida ugu wanaagsan ee nolosha ay ku hoggaamiyeen.
Xaqiiqdi waa dood wanaagsan, in kastoo…
Jul 22, 2007 markay tahay 10:37 PM
Xaqiiqdii ma aha dambi inaad taajir noqotid. Laakiin waan fahmay halgankaaga. Markii aan dhiganayay jaamacadda, waxaan safar shaqo ugu aaday Hindiya halkaas oo aan kawada shaqeynay agoon iyo baras (haa, weli way jiraan). Waxaan la halgamay bilo markii aan guriga imid sida dadku ugu $ $ qaataan waxyaabaha "doqonimada ah".
Kadib waxaan shaqo kahelay dukaanka Hallmark inta lagu gudajiray fasaxa Kirismaska ​​maxaa yeelay waxaan ubaahanahay $ buugaag simistarka xiga. Waqtigaas, waxaan ogaaday in kastoo waxyaabaha sida Swarovski crystal aysan lahayn qiimo weligeed ah - haddana waxay siiyeen dadka shaqooyin.
Qalinka wanaagsan waa laga yaabaa inuu si xad-dhaaf ah u shaqeeyo - laakiin waxaa jira qalin sameeye oo qoyskiisu ku faraxsan yahay inuu shaqo haysto.
Waxaan u maleynayaa in furaha uu yahay - haddii aad hanti leedahay iyo haddii kaleba - yaad isku halleeysaa? Iyo sidee taasi uga tarjumaysaa sida aad lacagtaada u isticmaasho?
Wixii ku saabsan faallooyinka aad ka bixisay kaftanka - waxaan si aan habsami leh u akhrinayaa kaftanka Masiixa. Waana aragti ka duwan tii hore Axdiga Cusub. Laakiin waxay ka hadlaysaa - waanan u goynayaa tan - sida kaftanka loogu isticmaali karo wax ka qabashada xaaladda aadanaha - illaa iyo inta aan diyaar u nahay inaan ku qosolno nafteena.
Sikastaba, waad ku mahadsantihiin boostada nasiinada ka duwan!
Jul 23, 2007 markay ahayd 8:08 AM
Qoraalka iyo tilmaamaha qoraalkani waa kuwo cajiib ah. Waxyaabaha daboolka ka ah “waxyaabaha laga fogaado” ayaa ah waxyaalaha ay tahay inaan ka hadalno, oo ay weheliso websaydhka 2.0 iyo tikniyoolajiyadda suuq geynta, iwm. Haddii aynaan ka wada hadlin aasaaska - saadaasha - ee ku soo bandhigaya muujinta ficil ahaan, ka dib markaa Si buuxda uma fahmin ficilkeena.
Masiixi ahaan (magac iyo iimaan labadaba), waa laygu tala galay (hadaan ahay qof mabda 'leh) si aan aduunka oo dhan ugu wajahno qaab cayiman - sida ay yihiin cawaan laaweyaal, aqoon yahano, iwm (hadii ay si lamid ah mabda' yihiin). Sidaa darteed waxaa muhiim noo ah inaan si joogto ah u raadsanno inaan fahamno oo aan su'aal ka saarno saadaalintaas iyo mabaadi'da ka dhalaneysa - si wadajir ah iyo shaqsi ahaanba. Waxaan ka baqayaa in asxaabteyda iyo asxaabteyda badan ee Mareykanka ay ka fogaadaan diinta iyo siyaasada sababtuna ay tahay mowduucyada oo ah kuwa shaqsiyadeed, laakiin maxaa yeelay waxaan bulsho ahaan ilawnay muhiimada iyo muhiimada ay leedahay in la fahmo saadaalinta iyo mabaadi'da (Kirishtaan, diin laawe, Juuwish et al. .), Taas bedelkeedna waxaas oo keliya ayaa uga wada hadli kara nooc Jerry Springer ah oo qaab dusha sare ah, oo ah wax soo saar aad u xun.
Waxaan u maleynayaa in qoraallada sidan oo kale ah ay tahay tallaabo aad u wanaagsan oo loo qaaday dhinaca saxda ah.
Sii wad shaqada weyn, walaal.
Jul 23, 2007 markay tahay 9:18 PM
Farriin weyn. Way fiicantahay in la maqlo in wali ay jiraan dad wakhti ku lumiya ka hadalka arintaan. Dad badan oo ganacsi maskax leh ayaa ka fikira ganacsigooda oo intooda badani xitaa waxay iska ilaawaan qoyskooda ..
Jul 23, 2007 markay tahay 9:20 PM
Farriin weyn. Way fiicantahay in la maqlo in ay wali jiraan dad wakhti ku lumiya ka hadalka arintaan. Dad badan oo ganacsi maskax leh ayaa ka fikira ganacsigooda oo intooda badani xitaa waxay iska ilaawaan qoyskooda.
Jul 24, 2007 markay tahay 12:10 PM
Marka hore, maxay masiixiyiinta Masiixiyiinta ahi had iyo jeer ugu qasban yihiin inay is aqoonsadaan? Runtiina, muxuu qof ugu baahan yahay inuu isku caddeeyo diin kasta haba yaraatee?
Waxaan si fudud u necbahay erayga "iimaan" si fudud maxaa yeelay waa ficilka aan caqliga lahayn ee aaminaadda. Waxa ugu weyn ee ku saabsan "aaminaadda" waa in si buuxda ay u waddo fahamka - sida fahamkaagu u beddelo, sidaas oo kale aaminsanaantaadu. Caqabada caqiidada ayaa ah in ay jirto meel aad u yar oo isbedelka ah (ama cusbooneysiinta!) Iyo macluumaad cusub oo ka hor imanaya ama caqabad ku ah caqiidada sida caadiga ah isla markiiba waa la diiday.
Aniga ahaan, waxaan haystaa 'waxaan aaminsanahay' - waxaan aaminsanahay waxyaabo ku saabsan waxyaabaha, waxayna ku xiran yihiin isbadal ku saleysan fahamka. Xor ayaan u ahay inaan bedelo fahamkayga, taas oo macnaheedu yahay inaan haysto xulasho, iyo xulasho aniga ayaa mas'uul ka ah aayahayga.
Waxaan fariin fadhiistay 'qabyo' dhowr bilood hadda, iyo si fudud u gelinta $ 0.02 qiimihiisu halkan waxay iga caawisay inaan ka shaqeeyo fikradda inteeda kale (hadda haddii aan kaliya ku diyaarin karo qoraaladayda halkan).
Doug, tani waa qoraal weyn waana ku mahadsan yahay.
(ogaysiiska tiknoolajiyada dhinaca: fikrad kasta oo ku saabsan sababta aan u joojinayo wadajirka 'FireComox' si aan halkan ugu dhajiyo?)
Jul 24, 2007 markay tahay 1:33 PM
Waxaad sharad. Waxa kaliya ee aan rajeynayo inaan sameeyo ayaa sababa dadka inay ka fikiraan. Taasi waa waxa uu balooggu ku saabsan yahay about